Afeerraa cidhaa booda akaakayyuun misirroo &apos;Koleeraan&apos; du&apos;an, keessummoonni biroo dhukubsatan - BBC News Afaan Oromoo
BBC News Afaan Oromoo keessa naanna&apos;uu
Afeerraa cidhaa booda akaakayyuun misirroo &apos;Koleeraan&apos; du&apos;an, keessummoonni biroo dhukubsatan
16 Hagayya 2019
Waa&apos;ee qooduu baay&apos;ee dubbiisi
Keeniyaatti affeerraa cidhaan booda akaakayyuun misirrichaa koleeraan yoo du&apos;u, keessummoon biroon cidhicha irratti argaman 40 ta&apos;an dhibamanii hospitaala galan.
Misirroonni lameen garuu battaluma cidha isaanii raawwatanii bashannan (honeymoon) isaaniif Dubaayiin waan deemaniif du&apos;a akaakayyuu isaaniifi namoota sababa nyaata cidha isaanii irratti dhiyaateen kanneen &apos;Koleeraan&apos; dhibaman gaafachuullee hin dandeenye.
Miseensi paarlaamaa &apos;hirriyyaasaa dubartii&apos; kabaluusaatiif to&apos;atame
Miseensi mana maree daa&apos;ima qabattee paarlaamaa seente ari&apos;amte
Af&apos;-yaa&apos;iin sababa dhuufuun yaa&apos;ii mana maree addaan kutuuf dirqame
Kanneen erga qoratamanii booda kooleeraan irratti argame magaalaa Naayiroobiitti ciisanii yaallaanamaa jiraachuu gaazexaan &apos;Star&apos; jedhamu gabaaseera.
Qorannoon akka mulliseetti, jarreen kunneenis koleeraan qabamusaaniifi erga guyyaa Sanbataa sirnicha irratti hirmaatanii booda summaa&apos;uu nyaataaf saaxilamuu gaazexaan kun eereera.
Gaazexaan kunis suuraa sirnichaa osoo nyaanni cidhaa hin dhiyaatiin duraa gara namoota 450 ta&apos;anii ergaa tiwiitaraan gadhiiseera.
Misirroonni lamaa garuu summaa&apos;uu nyaatichaatiin kan hin miidhamiin yoo ta&apos;u, bashannana cidhasaaniif jecha battalumatti cidhasaaniin booda guyyaa Sanbataa gara Dubaayiitti balalii&apos;usaaniin gabaafameera.
Garuu akaakayyuun misirrichaa guyyaa Kibxtaa du&apos;unsaanii gabaafameera.
Haata&apos;u malee, hoteelli nyaaticha dhiyeesse garuu himannaa kanarratti yaada omaa hin kennine.
Koleeraan dhiibee infekshinii garaa kaasaa cimaa yoo ta&apos;u, nyaata ykn bishaan baakteriyaa &apos;Vibrio cholera&apos; jedhamuun faalamee kan dhufuudha. Dhukubichis Keeniyaa keessatti kan haaraa miti.
Waggoota lama dura, hirmaattoonni konfarnsii idil-addunyaa ta&apos;a Keeniyaa Hotel Kaappitaal keessatti dhukkuba kanaan qabamanii turan.
Keeniyaa: Miseensi paarlaamaa hirriyaasaa kabaluusaatiif to&apos;atame
14 Waxabajjii 2019
Miseensi mana maree Keeniyaa daa&apos;ima qabattee paarlaamaa seente ari&apos;amte
7 Hagayya 2019
Keenyaa Hoomaa Bay: Af&apos;-yaa&apos;iin sababa dhuufuu yaa&apos;ii mana maree addaan kutuuf dirqame
Maaliif turtiin barnoota yuunivarsitii inni xiqqaan waggaa afur ta&apos;e?
Pirezidaantiin duraan Sudan &apos;Saawudiirraa maallaqa miliyoonotaan fudhateera&apos;
Ameerikaan Huwaaweef ji&apos;a sadii kennite
&apos;Waan natti dhaga&apos;amu himannaan mucaakoo na jalaa fudhatu jedheen sodaadhe&apos;
Dubartiin &apos;ulfa taa&apos;uu hinbeekne&apos; du’a mucaasheetti gaafatamte
Konkolaattonni fe&apos;umsaa qaraxa hinkanfalle dirooniin adamsamaa jiru
Copyright © 2019 BBC. Qabiyyee iddoola alaatiif BBC&apos;n itti hin gaafatamu. Itti dhiyaachuu keenya gara geessituu.